မြန်မာလို ဘာသာပြန်ပေးမယ် » ICT.com.mm
ICT.com.mm > Review > Apps > မြန်မာလို ဘာသာပြန်ပေးမယ်
ဘာသာစကား (၂၄)မျိုးမှ စကားလုံးတွေကို မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆို ပေးနိုင်တဲ့ Online Dictionary ၀က်ဘ်ဆိုက်ပါ။ ယင်း၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ Adminstrator တစ်ဦးအဖြစ် ပါ၀င်ဖို့ စိတ်၀င်စားသူတွေ အနေနဲ့ မြန်မာစာကို ဖတ်နိုင်၊ ရေးနိုင်ဖို့ပဲ လိုအပ်ပါတယ်လို့ ၀က်ဘ်ဆိုက်က ဆိုပါတယ်။
English, Hebrew, Greek, Portuguese, French, Dutch, Arabic, Spanishစတဲ့ နိုင်ငံတကာ ဘာသာစကား၊ Norwegian, Finnish, Romanian, Polish, Swedish, Danish, German, Russian စတဲ့ ဥရောပ ဘာသာစကားတွေနဲ့ Japanese, Chinese, Korean, Malaysia, Filipion, Vietnamese, Thai, Hindiစတဲ့ အာရှ ဘာသာ စကားတွေကို မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Typing Speed စစ်ဆေးတာ၊ မြန်မာဖောင့် ရယူနိုင်တာတွေအပြင် များပြားလှတဲ့ အထွေထွေသုံး မြန်မာ အဘိဓာန်တွေကိုလည်း လေ့လာ သုံးစွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
NaingLinAung4years ago
very good. I like this application.
Myo Kyaw Latt4years ago